Canug yar oo u dhalatay dalka Mareykanka oo ka yaabsatay caalamka oo idil (Daawo Muuqaal). | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Canug yar oo u dhalatay dalka Mareykanka oo ka yaabsatay caalamka oo idil (Daawo Muuqaal).
Canug yar oo u dhalatay dalka Mareykanka oo ka yaabsatay caalamka oo idil (Daawo Muuqaal).
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 17-08-16 11:03 AM Carly Rose waa gabar 13 sanno jir ah taas oo ruxday masaraxii lagu qabtay bandhiga X Factor oo ah bandhig sanadle ah kaas oo lagu qabto dalka Mareykanka.
Gabadhan ayey rumeysan waayeen dadkii daawanayey bandhiga oo uu ugu horeeyey garsooraha caanka ah ee Simon Cowell kaas oo dhax dhaaxiye ka ahaa bandhigan, waxa uuna Simon Cowell ku yiri gabadhan yar adiga ma’aha qof heesay ee waa qof ku jira daaha gadaashiis.
Halkan hoose ka daawo bandhiga cajiibka badan ee inanta Karl Rose